Misy Linux Kernel 3.8, kinova Linux tsy manam-paharoa sy mbola tsy nisy toa azy Avy amin'ny Linux
Misy Linux Kernel 3.8, kinova Linux tsy manam-paharoa sy mbola tsy nisy toa azy
Vao haingana ny 3.8 version ny antsika voam tiako indrindra, Linux.
Ny lisitry ny vaovao dia be dia be foana, azonao atao ny mahita azy amin'ny KernelNewbies.orgNa izany aza, hanazava kely momba ny vaovao sasany hitako fa liana liana aho
1 Fanohanana ny rafitra fisie Flash an'ny Samsung vaovao:
2 Fanatsarana ny rafitra fisie hafa (ext4, btrfs ary xfs):
3 Kery voalohany tamin'ny 2013 sy ny kernel voalohany izay misintona fanampiana ho an'ny mpanodina:
Fanohanana ny rafitra fisie Flash an'ny Samsung vaovao:
Fotoana vitsy lasa izay miresaka momba ity rafitra Samsung F2F2 ity izahayEny, ny kernel azonay dia efa manohana an'ity rafitra noforonin'i Samsung ity ho an'ny fitaovana fahatsiarovana miorina amin'ny teknolojia NAND (ireo ampiasaina amin'ny fitaovana finday, takelaka sns sns, ary koa karatra SD na SSDs (Fiara fanjakana matanjaka).
Fanatsarana ny rafitra fisie hafa (ext4, btrfs ary xfs):
BTRFS mahazo fanatsarana, manokana izao dia tsy maintsy ho haingana kokoa satria namboarina ho fanatanterahana izany, izay natao (mamaky teny Stefan Behrens avy ao aminy manao):
«Ny kaody fikosehana no kaody mahomby indrindra hamakiana ireo angon-drakitra kapila, izany hoe, mamaky mifandimby izy io mba hisorohana ny fivezivezin'ny lohan'ny kapila, esoriny ireo sakana tsy voapetraka, ampiasaina ny mekanika mamaky mialoha, ary misy izany rehetra izany ny kaody mamantatra sy manamboatra lesoka.«
ext4 mbola mahazo fanatsarana hatrany. Miresaka zavatra ara-teknika bebe kokoa, ao amin'ny inode ny fampahalalana dia tsy tehirizina toy izany, ny mombamomba ny angona dia voatahiry ao (tompony, daty famoronana, habe, sns.) fa noho izany dia tsy voatahiry ao ny angon-drakitra, ny mombamomba azy ireo ihany, ankehitriny, izy io dia azo tehirizina tahiry kely ao ireo inode izay very maina. Ny tiako holazaina ary miteny mazava, ankehitriny hanana toerana malalaka bebe kokoa amin'ny HDDs izahay, ataon'izy ireo ny fampitahana fa avy amin'ny folder / usr / standard, 3% ny habaka no ho voatahiry 😉
Kery voalohany tamin'ny 2013 sy ny kernel voalohany izay misintona fanampiana ho an'ny mpanodina:
Efa ela no noresahina io, ny Linux (kernel) fotsiny tsy hanome Fanohanan'ny processeur i386:
Ingo Molnar dia nanakana ny fanohanany ny processeur Intel 386 taorian'ny nangatahany ny fanesorana azy ireo ho an'ny kernel Linux 3.8 ho avy izay nanaovan'i Linus Torvalds fanekena avy hatrany.
Nanapa-kevitra ireo mpamorona kernel fa tonga ny fotoana hanesorana ny fanohanana an'ireo processeur ireo, ary indrindra ho an'ireo 386-DX taloha sy 386-SX. Io dia ahafahana manatsara ny tsingerin'ny adidy amin'ny fotony. Mikasika izany dia nanambara i Molnar:
«Nahatonga asa fanampiny ny fahasarotany rehefa naniry ny hanisy fanovana ny primitives mpanohana SMP nandritra ny taona maro izahay.«
Midika izany fa ny solosaina taloha miaraka amina processeur 386 DX33 manomboka amin'ny taona 91 dia tsy afaka mihazakazaka miaraka amin'ireo voanio vaovao manomboka izao. I Linus Torvalds tenany dia nanaiky tanteraka ilay fanapahan-kevitra: “Tsy be fihetseham-po aho. Fanamaivanana ".
Ary io indrindra no notondroiko tamin'ny lohatenin'ilay lahatsoratra, io no kernel voalohany nanala ny fanohanana zavatra iray, na dia tsy maneho olana intsony aza ity (amin'ny fankasitrahako manokana), hitako ho zavatra tsara aza izany.
Raha misy olona manana processeur i386 nanomboka ny taona 1991, dia afaka manohy mampiasa Linux izy ireo saingy amin'ny kinova ambany noho ny 3.8, dia io simple tsotra io
Tsy mifarana eto ny fanatsarana, fanatsarana maro no nampiana momba ny tambajotra (Wi-Fi indrindra), ny fanamboarana bibikely, sns., Saingy eo ho eo no misy izany.
Na izany na tsy izany, antenaiko fa nahaliana anao io, na izany aza Manoro hevitra anao aho vakio ny fanovana rehetra amin'ny tranokala ofisialy raha manana fanontaniana ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Misy Linux Kernel 3.8, kinova Linux tsy manam-paharoa sy mbola tsy nisy toa azy
ary ahoana no hanaporofoantsika izany?
Azonao atao ny miandry azy io hiditra ao amin'ny toeran'ny distro anao, na mety hitera-doza ianao ary hanangona azy, heveriko fa havoaka eto na farafaharatsiny hanome rohy mankamin'ny misy azy ireo izy ireo: http://git.kernel.org/?p=linux/kernel/git/torvalds/linux.git;a=summary
Andao hojerentsika raha toa ianao ka sahy avy amin'ny Linux mametraka tutorial fampiorenana; D
Eny, mety hahasoa izy io, fa tsy amin'ny fomba fanangonana ny kernel ihany, fa ilaina ny fanazavana ankapobeny momba ny fanangonana xD
amin'ny Debian ...
Compilarrr !! xD haha, na miandry ny distro ny distro amin'ny kernel vaovao.
Raha manana Arch na derivatives, na distro hafa izay mihodina ianao dia azo antoka fa efa manana izany.
Linez dia hoy izy:
Azonao atao ny manaraka ireto torolàlana ireto (atahorana ianao), efa manana ny kernel fonosana ho an'ny Ubuntu ianao:
Valiny tamin'i Linez
Raha ny marina ny fanangonana ny kernel dia tsy sarotra mihitsy, na tsy sarotra loatra .. raha vao nanao izany aho dia nahatsapa ho kamo 😀
Indray mandeha saika nataoko ... haha ​​novonoinao io elav io aho. 😉
Izaho dia nihazakazaka ny 3.8-rc6 hatramin'ny nivoahany herinandro na roa lasa izay, tena tsara ny nataoko fa tsy hadisoana iray akory.
Ny fanangonana ny kernel amin'ny debian sy ny derivatives dia tena tsotra, apetrako eto ny fombako.
Mametraha fonosana ilaina: libncurses5-dev build-vital
Ampidino ny kernel, atero eo amin'ny toerana misy toerana malalaka (mitombo hatramin'ny 1gb izy rehefa eo am-panaovana azy).
Adikao ao anaty fampirimana kernel ny config ankehitriny hampiasaina ho fototra:
Mihazakazaka manao oldconfig izahay mba hiteraka config vaovao mifototra amin'ilay taloha.
Amin'ity interface ity, esorina ny fanohanana ho an'ireo fitaovana izay tsy ampiasainay, mifidy ny maritrano (586, i686, sns), ny fahita matetika an'ny CPU (io no resahin'ireo debian miaraka amin'ny fanampiana mandritra ny fotoana tena izy ao anaty wheezy, mampiditra takelaka mamela izy ireo atsangano ambony matetika ny refy).
Raha manindry isika? Ao amin'ny modely iray dia mampiseho ny fanampiana, ny famakiana dia azontsika fantarina raha tena mila izany isika na raha ilaina izany.
Rehefa ok ny zava-drehetra dia mivoaka ny interface izahay ary mitahiry ny .config miaraka amin'ny F9, ary manorata:
manao -jX deb-pkg
X = cores + 1
Fomba fanao tsara ny mihazakazaka azy amin'ny tsara mba tsy hanome lanja firy ny fizotran'ny fanangonana ary tsy hiditra amin'ny lalan'ny solosaina mandritra ny fotoana iasantsika ... cofff ... hitantsika ny Big Bang Theory ...
Rehefa vita izany dia manana deba tsara 3 hapetraka isika, ny kernel, lohateny ary libc.
AZA esory ny kernel taloha mandra-pitsapanao tsara ilay vaovao, tsy misy manimba ny fananana kernel "lavanila" sao hipoaka ilay vaovao.
Ho an'ireo mpampiasa disto hafa dia hazavaiko fa misy koa ny manao rpm-pkg sy tgz-pkg, manaova fanampiana dia ho hitanao ny safidy.
Ny modus operandiako dia ny fanesorana tsikelikely ny zavatra ary ataoko ny .config. (Mercurial dia mipoaka amin'ny pc, na izaho aza miova endrika raha sendra lozam-pifamoivoizana)
(Mercurial dia mipoaka amin'ny pc, na izaho aza miova endrika raha sendra lozam-pifamoivoizana)
xDDD tsara tuto .. iray andro izao dia mientanentana aho 😛
Matotra tokoa, hatramin'ny namakiako ny hginit nataon'i Joel Spolsky dia tsy nijanona ny fampiasana azy aho, tena tsotra izany ary mahazo be ianao.
Toro iray hafa indray, rehefa mandeha misintona ny kernel izy ireo dia mandika ny url ary manova ny bz2 ho xz.
Manantena aho fa ho tonga any Chakra tsy ho ela !!
Manantena koa aho any sy ao amin'ny Arch fa samy manana ny PC-ko.
Ankehitriny rehefa milaza an'io aho, hafahafa ny hoe LibreOffice 4 no voalohany ao Chakra ary i Arch tsy mampiseho 0.0 akory
Ny zavatra hafahafa iray hafa dia ny fanoratako ireo lantom-peony ivelan'ny litera, toy izany ihany, fa izay no tena nahafinaritra azy, ha!
Manjaro sy chakra dia manimba eo amin'ny vondrom-piarahamonina andohalambo, maro ny mpamorona sy mpitsapa no mirohotra mankamin'ireto fork ireto.
(miala tsiny amin'ny fandresena)
Marina izany, mihazakazaka i Arch ary mampiseho kely izany, saingy tsy dia misy akony firy aminy izany.
Ary tsy fantatro fa Manjaro dia mifototra amin'ny Arch.
Aza adino fa ny Chakra dia mihodina antsasak'adiny dia mety maharitra herinandro na volana maromaro vao tonga, ka raha manavao hatramin'ny farany izy ireo dia ireo no rindranasa ary kde 🙂
Ao amin'ny chakra, ny kernel vaovao dia tsy hahatratra farafaharatsiny raha tsy amin'ny kinova 3.x.6, ohatra, nisy 3.7.6 ..
Ny loharanom-pahalalana dia ireo mpamorona chakra mitovy, abveritas, manutortosa sns.
Ho an'ireo izay mangataka fampianarana momba ny fanangonana, ity misy iray: http://hackingthesystem4fun.blogspot.com/2012/11/como-compilar-un-custom-kernel-y-no.html
Ny fisalasalana momba ny fomba fiasa, apetraho amin'ny hevitra izany.
Misaotra ny rohy 🙂
Manararaotra miteny aho fa namaky lahatsoratra maromaro tao amin'ny bilaoginao, tiako be izy ireo, misaotra anao tamin'ny asanao 😀
miandry ny fisehoany ao amin'ny arch linux = ^. ^ =
Nahatratra ny SCAR tamin'ny taonjato aho noho ny i386, fa zahao ary i686 aho 🙂
Ary fotoana izao hanavaozana ny pc, na dia amd x2 64-bit aza
Mandinika kernel 3.8-0.towo-siduction-686 aho. amin'ny fanandramana debian manampy ny repositories siduction (azo avy amin'ny debian sid) ary mametraka ny kernel.
Hatreto aho dia nanao izany tsy nisy olana, na dia tsy manam-pahaizana manokana hanaovana tombana be loatra aza aho.
Indray mandeha aho dia nanandrana nametraka funtoo tao anaty boaty virtoaly ………. Maharitra 6 ora ny fanangonana ny kernel raha toa ka tsy mampiasa afa-tsy processeur iray ianao
Fomba mahafinaritra hanendasana zavatra amin'ny mari-pana nampiakaran'ny processeur, ha
Raha ny zavatra novakiako tany amin'ny toerana hafa, dia toa manatsara kokoa ny angovo sy ny fenitra ACPI ity kinova ity; ankoatry ny fampihenana ny fihinanana fahatsiarovana, ankoatry ny fanovana lehibe hafa. Hametraka Fedora amin'ny HD ivelany aho, satria azoko antoka fa hanavao ity kernel ity izy ireo atsy ho atsy, andao hojerentsika ny fandehany.
Miandry ny fanekena anao amin'ireo distros hafa ..
PS: Soa ihany aho fa manokana fotoana bebe kokoa amin'ny mifanentana sy fanatsarana miaraka amin'ny fitaovana sy peripheraly vaovao an'ny PC vaovao 😉
Koa satria isika momba io lohahevitra io dia mametraka fanontaniana aho hoe iza ny rafitra fisie izay tsara kokoa ary amin'ny tranga inona? EXT4 sa BTRFS?
Raha ny teôria dia ny BTRFS no tsy taovolo fa tsy nambaran'izy ireo ho marin-toerana (na dia misy hippies efa mampiasa azy aza) noho izany dia ampirisihina hijanona amin'ny ext4.
Eto dia misy lahatsoratra iray momba izany.
Misaotra amin'ny vaovao. Efa henoko fa tsara ny btrfs, fa mila miandry foana ianao.
umm, azonao an-tsaina ve distro avy amin'ny linux?
Efa nieritreritra an'izany imbetsaka isika fa ho very maina:
- Bebe kokoa noho izany, hiorina soa aman-tsara amin'ny fizarana hafa izahay.
- Ny olana mahazo ny latabatra hampiasaina
- Tsy manana fahalalana hanohanana ireo fonosana izahay, ary koa ny bandwidth, na ny enti-manana.
Na izany na tsy izany, ireto ny sasany amin'ireo olana .. 😀
Manana lisitra mainty lisitra mainty aho !!! ka ho an'ny manaraka haha.
Miala tsiny amin'ny halavany, fa mba tsy hanao SPAM dia mandika sy mametaka fanontaniana iray napetrako tamina pejy hafa momba ity kernel ity sy ny valiny nomeny ahy:
Mampalahelo fa tsy afaka manaporofo izany; Manana ahiahy aho ary ity izy; Mampiasa solosaina finday Samsung RV408 misy 6GB sy HD 320 aho; Izaho dia manana Kubuntu 12.10 x64 napetraka ary apetrako ny kernel 3.5.7.2 (ny farany amin'ity andiany ity) ary ny mpitety rehetra dia miasa tsy misy olana ary koa ny rafitra sy ny masinina, saingy, rehefa mametraka kernel aho amin'ireo andiany 3.6 na 3.7, ny Opera sy ny Chromium dia tsy manokatra mailaka intsony, miditra ao anaty pejy izy ireo fa kosa maka fotoana be entina na tsia. Omaly aho dia nanandrana ny kinova Alfa an'ny Kubuntu 13.04 izay mitondra ny kernel 3.8 ary manome ahy olana amin'ny wifi sy ilay mpitety efa fantatra.
Midika ve izany fa ny masiniko dia tonga any amin'ny kernel 3.5.7.2 fotsiny ka mandeha tsara ny zava-drehetra? Raha mametraka kinova avo kokoa aho na dia mandeha tsara aza ny rafitra sy ny ankamaroan'ny rindranasa, tsy hihatsara ve ny olan'ny mpitety tranonkala sy Wi-Fi? Efa nisy nitory an'io tranga io ve? Aza miteny amiko fa izaho irery no hafahafa— hehehe
Azoko atao ny mahazo hevitra momba ny famoizam-po amin'ny fomba fijerinao. Raha ny tena izy dia misy fanazavana tsotra kokoa noho io fanangonana olana io.
Mikasika ireo kinova kernel dia tadidio fa ny kernel Ubuntu sy ny derivatives azy dia novain'i Canonical, midika izany fa modely maro no nohajaina mba hiasa miaraka amin'ny fitsipiky ny fitsipiky ny programa. Raha ampianay amin'izany fa manana solosaina finday Samsung ianao, izay miaraka amin'i Apple sy Sony Vaio dia iray amin'ireo orinasa tsy manangona fitaovana tsy miandany, ny vokany dia olana maro rehefa tsy mampiasa rindrambaiko manokana (izany hoe Windows sy Windows mpamily) Samsung).
Ny antony tsy mandeha ho anao ny wifi ao amin'ny Kubuntu 13.04 dia satria azo antoka fa tsy nohavaozina ireo modely mpamily, ary araka ny nolazainay fa tsy mifanaraka amin'ny Samsung izy ireo, fa ireo izay ampidin'i Canonical amin'ny minitra farany amin'ny dikanteny dia lalao famaranana mifanaraka.
Ny tolo-kevitro dia ny hampiasanao ireo kinova kernel natolotry Canonical fotsiny, mba ho azo antoka foana ny fahombiazanao. Ny safidy faharoa dia ny fanangonana ny kernel anao fa ampio ilay fanahafana Canonical mitovy amin'ireo modules sy patches mitovy aminy.
Izaho dia nanana Samsung X06 tamin'ny 2004/2005 niaraka tamin'ny Pentium M. Ny marina dia masinina tsara izy ireo, tsara kalitao ary misy endrika am-pitandremana, saingy simba izy ireo noho ny politikan'ny Samsung amin'ny fanovana ny ROM amin'ireo singa. Hanaovana azy " tsy miandany ".
Tsy mila misy olana amin'ny laptop-nao isan-taona mialoha, mila miaina miaraka amin'ireo fikitihana fanampiny ireo ianao mandra-pahatongan'ny ekipanao manaraka. Ny tenako dia niafara tamin'ny naha mpankafy an'i IBM / Lenovo sy Dell ahy indrindra noho ny fitaovan'izy ireo tsy miandany sy tsy tia namana.
Manana fanontaniana momba ny hafanan'ny kernel sy ny processeur aho.
Mampiasa solosaina finday Toshiba Satelite aho izay mazàna mafana be amin'ny Linux, hoy ny sensor 90C (Kernel 3.2 sy teo aloha).
Miaraka amin'ny kernel 3.8 dia tsikaritra fa mihena ny hafanana, raha ny filazan'ny sensor 56-60C Temperature (izay hitako ihany koa tamin'ny kernel 3.7 Liquorix).
Azo itokisana ve izany fahasamihafana 30C izany? Mafana tsy dia atahorana intsony, asehony; fa be tokoa ?. Olana amin'ny sensor ve izany?
Ahoana ny hevitrao?.
Efa ao amin'ny repositories Manjaro!
ripper vy dia hoy izy:
Ny fikirakirako dia mifanaraka amin'ny x64 fa nametraka ny fitsapana debian tamin'ny kinoviny x86 aho satria ny ankamaroan'ny programa dia mora hita ao amin'io maritrano io, ankehitriny miaraka amin'ity vaovao ity dia manontany tena aho hoe azoko apetraka ve ilay kernel raha tsy mila mamolavola ny masiniko? O_O
Valio i rippermetalero
Nametraka an'i Debian tamin'ny solosainako aho, nanisy habaka tamin'ny kapila backup ary avy eo tsy nahy aho fa nisy lesoka kapila ary potika i Fedora.
Fedora no distro namela ahy hikasika ny ho avy, hahitako hoe rahoviana no hapetrako indray mba hitsapana an'io kernel io.
Omaly aho tonga tany amin'ny fiangonan'i Arch, andao hojerentsika ny fandehany
Glovebox: ny interface Ubuntu Phone OS amin'ny Android